Xasuuqgii Qawmiyada Rohingya Oo la degay sumcadii Aung San Suu Kyi – Idil News
Xasuuqgii Qawmiyada Rohingya Oo la degay sumcadii Aung San Suu Kyi
Hay’adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa sheegtay in warbixintu ay tahay isku day “lagu qarinayo wixii dhacay”.
Hay’addaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa Qarammada Midoobay ugu baaqay in gobolka loo ogolaado in ay tagaan dad xaqiiqo raadin ah.
Laakiin war qoraal ah oo milatarigu uu soo dhigay Facebook ayay ku sheegeen in ay waraysi la yeesheen kumannaan shacab ah kuwaas taageeray sheegashadooda, waxayna sheegeen in dadku ay qireen in laamaha ammaanku:
Aysan laynin dad “aan waxba galabsanin”
Aysan “faraxumaynin oo aysan kufsanin dumarka”
Aysan “xirin, garaacin, dilinna dadka tuulooyinka”
Aysan xadin “dahab, gawaari iyo xoolo ay dadka tuulooyinku lahaayeen”
Aysan “dab qabadsiinin masaajiddo”
Aysan u hanjabin, u cagajuglaynin, saarinna dadkii tuulooyinka”
Aysanna “gubin guryo”
Afhayeen u hadlay hay’adda Amnesty International ayaa sheegay in milatarigu uu “caddeeyay” in uusan doonaynin isla xisaabtan”.
Wuxuu intaas ku daray in beesha caalamku ay sare u qaaddo xaqiijinta in tacadiyadaas aan laga gudbin iyadoo aan la ciqaabin dadkii gaystay.”
Sareeye Gaas Maung Maung Soe ayaa “kaydka la galiyay,” sida uu sheegay qof u hadlay wasaaradda difaaca.
Kooxda magaceeda loo soo gaabiyo ARSA oo sheegata in ujeedadoodu ay tahay in ay “difaacdo, badbaadiso ilaalisana” dadka Rohingya ayaa ka kooban dhallinyaro samaysa hub guryaha lagu hagaajiyo waxayna tabobar ka helaan dad ajaaniib ah sida ay sheegeen dadka la socda xaaladda deegaankaas.